နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ ဇယား - ဝီကီပီးဒီးယား
နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ ဇယား
၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလအထိ ၁၀၀၇ နေရာကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ကာ ၁၆၁ နိုင်ငံရှိ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၇၇၉ နေရာ၊ သဘာဝနေရာ ၁၉၇ ခုနှင့် အစုအပေါင်းနေရာ ၃၁ ခု ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံများကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကော်မတီမှ ပထဝီဝင်ဇုန် ငါးခုအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ယင်းဇုန်များမှာ အာဖရိက၊ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ၊ ဥရောပ နှင့် မြောက်အမေရိက၊ နှင့် လက်တင်အမေရိက နှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ တို့ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ
၂ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ များစွာပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံများ
Afghanistan ၂ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Albania ၂ ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Algeria ၆ ၁ ၇ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Andorra ၁ ၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Argentina ၄ ၄[note ၁] ၈ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Armenia ၃ ၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Australia ၁၂ ၃ ၄ ၁၉ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Austria ၉[note ၂] ၉ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Azerbaijan ၂ ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Bahrain ၂ ၂ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Bangladesh ၁ ၂ ၃ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Barbados ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Belarus ၁[note ၃] ၃[note ၄] ၄ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Belgium ၁၁[note ၅] ၁၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Belize ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Benin ၁ ၁ အာဖရိက
Bolivia ၁ ၅ ၆ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Bosnia and Herzegovina ၂ ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Botswana ၁ ၁ အာဖရိက
Brazil ၇ ၁၂[note ၁] ၁၉ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Bulgaria ၂ ၇ ၉ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Burkina Faso ၁ ၁ အာဖရိက
Cambodia ၂ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Cameroon ၂ ၂ အာဖရိက
Canada ၉[note ၆] ၈ ၁၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Cape Verde ၁ ၁ အာဖရိက
Central African Republic ၁ ၁ ၂ အာဖရိက
Chad ၁ ၁ အာဖရိက
Chile ၅ ၅ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
China ၉ ၃၃ ၅ ၄၇ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Colombia ၂ ၅ ၇ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Congo ၁ ၁ အာဖရိက
Costa Rica ၃[note ၇] ၃ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Ivory Coast ၃[note ၈] ၁ ၄ အာဖရိက
Croatia ၁ ၆ ၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Cuba ၂ ၇ ၉ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Cyprus ၃ ၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Czech Republic ၁၂ ၁၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Democratic People's Republic of Korea ၂ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Democratic Republic of the Congo ၅ ၅ အာဖရိက
Denmark ၃ ၃ ၆ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Dominica ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Dominican Republic ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Ecuador ၂ ၂ ၄ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Egypt ၁ ၆ ၇ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
El Salvador ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Estonia ၂[note ၄] ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Ethiopia ၁ ၈ ၁၀ အာဖရိက
Finland ၁[note ၉] ၆[note ၄] ၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Fiji ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
France ၃ ၃၅[note ၅] ၁[note ၁၀] ၃၉ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Gabon ၁ ၁ အာဖရိက
Gambia ၂[note ၁၁] ၂ အာဖရိက
Georgia ၃ ၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Germany ၃[note ၁၂] ၃၆[note ၁၃][note ၁၄][note ၁၅] ၃၉ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Ghana ၂ ၂ အာဖရိက
Greece ၁ ၁၅ ၂ ၁၈ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Guatemala ၂ ၁ ၃ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Guinea ၁[note ၈] ၁ အာဖရိက
Haiti ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Vatican City ၂[note ၁၆] ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Honduras ၁ ၁ ၂ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Hungary ၁[note ၁၇] ၇[note ၂] ၈ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Iceland ၁ ၁ ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
India ၆ ၂၆ ၃၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Indonesia ၄ ၄ ၈ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Iran ၁၇ ၁၇ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Iraq ၄ ၄ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Ireland ၂ ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Israel ၈ ၈ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Italy ၄[note ၁၈] ၄၆[note ၁၆][note ၁၉] ၅၀ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Japan ၄ ၁၄ ၁၈ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
ဂျေရုဆလင်မြို့ (ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှ အဆိုပြုခဲ့သောနေရာ)[note ၂၀] ၁ ၁ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Jordan ၃ ၁ ၄ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Kazakhstan ၁ ၃ ၄ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Kenya ၃ ၃ ၆ အာဖရိက
Kiribati ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Kyrgyzstan ၂ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Laos ၂ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Latvia ၂[note ၄] ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Lebanon ၅ ၅ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Lesotho ၁ ၁ အာဖရိက
Libya ၅ ၅ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Lithuania ၄[note ၄][note ၂၁] ၄ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Luxembourg ၁ ၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Republic of Macedonia ၁ ၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Madagascar ၂ ၁ ၃ အာဖရိက
Malawi ၁ ၁ ၂ အာဖရိက
Malaysia ၂ ၂ ၄ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Mali ၃ ၁ ၄ အာဖရိက
Malta ၃ ၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Marshall Islands ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Mauritania ၁ ၁ ၂ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Mauritius ၂ ၂ အာဖရိက
Mexico ၅ ၂၇ ၃၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Moldova ၁[note ၄] ၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Mongolia ၁[note ၂၂] ၁ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Montenegro ၁ ၁ ၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Morocco ၉ ၉ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Mozambique ၁ ၁ အာဖရိက
Myanmar ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Namibia ၁ ၁ ၂ အာဖရိက
Nepal ၂ ၂[note ၂၃] ၄ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Netherlands ၁[note ၁၂] ၁၀ ၁၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
New Zealand ၂ ၁ ၃ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Nicaragua ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Niger ၂ ၁ ၃ အာဖရိက
Nigeria ၂ ၂ အာဖရိက
Norway ၁ ၆[note ၄] ၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Oman [note ၂၄] ၄ ၄ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Pakistan ၆ ၆ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Palau ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Palestine ၂ ၂ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Panama ၃[note ၇] ၂ ၅ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Papua New Guinea ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Paraguay ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Peru ၂ ၇ ၂ ၁၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Philippines ၃ ၃ ၆ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Poland ၁[note ၃] ၁၄[note ၁၄] ၁၅ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Portugal ၁ ၁၅[note ၂၅] ၁၆ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Qatar ၁ ၁ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Republic of Korea ၁ ၁၀ ၁၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Romania ၁ ၆ ၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Russia ၁၀[note ၂၂] ၁၆[note ၄][note ၂၁] ၂၆ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Saint Kitts and Nevis ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Saint Lucia ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
San Marino ၁ ၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Saudi Arabia ၃ ၃ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Senegal ၁ ၅[note ၁၁] ၁ ၇ အာဖရိက
Serbia ၄ ၄ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Seychelles ၂ ၂ အာဖရိက
Slovakia ၂[note ၁၇][note ၂၆] ၅ ၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Slovenia ၁ ၂ ၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Solomon Islands ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
South Africa ၃ ၄ ၁ ၈ အာဖရိက
Spain ၃ ၃၉[note ၂၅] ၂[note ၁၀] ၄၄ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Sri Lanka ၂ ၆ ၈ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Sudan ၂ ၂ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Suriname ၁ ၁ ၂ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Sweden ၁[note ၉] ၁၃[note ၄] ၁ ၁၅ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Switzerland ၃[note ၁၈] ၈[note ၁၉] ၁၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Syria ၆ ၆ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Tajikistan ၁ ၁ ၂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Tanzania ၃ ၃ ၁ ၇ အာဖရိက
Thailand ၂ ၃ ၅ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Togo ၁ ၁ အာဖရိက
Tunisia ၁ ၇ ၈ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Turkey ၁၁ ၂ ၁၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
Turkmenistan ၃ ၃ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Uganda ၂ ၁ ၃ အာဖရိက
Ukraine ၁ ၆[note ၄] ၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
United Kingdom ၄ ၂၃[note ၁၃] ၁ ၂၈ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
United States of America ၁၂[note ၆] ၉ ၁ ၂၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
United Arab Emirates ၁ ၁ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Uruguay ၁ ၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Uzbekistan ၄ ၄ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Vanuatu ၁ ၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Venezuela ၁ ၂ ၃ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
Vietnam ၂ ၅ ၁ ၈ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
Yemen ၁ ၃ ၄ အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
Zambia ၁[note ၂၇] ၁ အာဖရိက
Zimbabwe ၂[note ၂၇] ၃ ၅ အာဖရိက
(less duplications) ၁၄ ၂၀ ၁ ၃၅
စုစုပေါင်း ၁၉၇ ၇၇၉ ၃၁ ၁,၀၀၇ ၁၆၁ State Parties
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ များစွာပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံများပြင်ဆင်
မှတ်ချက်။ ။ အောက်ပါစာရင်းများမှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ဆယ်ခုနှင့်အထက်ရှိသည့် နိုင်ငံများကိုသာ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အပြာ: အမွေအနှစ်နေရာ ၁၅ မှ ၁၉ ခုရှိသော နိုင်ငံများ
အစိမ်း: အမွေအနှစ်နေရာ ၁၀ မှ ၁၄ ခုရှိသော နိုင်ငံများ
အာဖရိကတိုက်ရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အမေရိကရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
မြောက်နှင့် အလယ်အာရှရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အနောက်အာရှရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အရှေ့အာရှရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
တောင်အာရှရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အရှေ့တောင်အာရှရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
မြောက်ဥရောပရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အနောက်ဥရောပရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အရှေ့ဥရောပရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
တောင်ဥရောပရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
အိုရှန်းနီးယားရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
ပျောက်ပျက်ရန် အန္တရာယ်ရှိနေသည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း
↑ ၁.၀ ၁.၁ The cultural site Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) is shared between Argentina and Brazil.
↑ ၂.၀ ၂.၁ The cultural site Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape is shared between Austria and Hungary.
↑ ၃.၀ ၃.၁ The natural site Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest is shared between Belarus and Poland.
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ ၄.၅ ၄.၆ ၄.၇ ၄.၈ ၄.၉ The cultural site Struve Geodetic Arc is shared among Belarus, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Moldova, Russia, Sweden, and Ukraine.
↑ ၅.၀ ၅.၁ The cultural site Belfries of Belgium and France is shared between Belgium and France.
↑ ၆.၀ ၆.၁ The natural sites Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek and Waterton Glacier International Peace Park are shared between Canada and the United States.
↑ ၇.၀ ၇.၁ The natural site Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park is shared between Costa Rica and Panama.
↑ ၈.၀ ၈.၁ The natural site Mount Nimba Strict Nature Reserve is shared between Côte d'Ivoire and Guinea.
↑ ၉.၀ ၉.၁ The natural site High Coast / Kvarken Archipelago is shared between Finland and Sweden.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ The mixed site Pyrénées - Mont Perdu is shared between France and Spain.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ The cultural site Stone Circles of Senegambia is shared between Gambia and Senegal.
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ The natural site The Wadden Sea is shared between Germany and the Netherlands.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ The cultural site Frontiers of the Roman Empire is shared between Germany and the United Kingdom.
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ The cultural site Muskauer Park / Park Mużakowski is shared between Germany and Poland.
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ The cultural site Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura is shared between the Holy See and Italy.
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ The natural site Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst is shared between Hungary and Slovakia.
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ The natural site Monte San Giorgio is shared between Italy and Switzerland.
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ The cultural site Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes is shared between Italy and Switzerland.
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ The cultural site Curonian Spit is shared between Lithuania and Russia.
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ The natural site Uvs Nuur Basin is shared between Mongolia and Russia.
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ The cultural site Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa Valley and Siega Verde is shared between Portugal and Spain.
↑ ၂၇.၀ ၂၇.၁ The natural site Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls is shared between Zambia and Zimbabwe.
↑ 36 World Heritage Sites in India By UNESCO | Holidify
↑ 23 Most Famous Historical Places in India That You Can't Miss in 2018 - Tripoto။ 27 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CLT-82/CH/CONF.015/8 - Report of the 1st Extraordinary Session of the Committee။ UNESCO။ 23 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CC-81/CONF. 008/2 Rev. - Justification for inscription on the List of World Heritage in Danger, 1982: Report of the 6th Session of the Committee။ UNESCO။ 23 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ PH gets 6th World Heritage site
ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ — တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ စာရင်း — တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ — ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အသေးစိတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
၃၆၀° မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံ — ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံ
VRheritage.org — ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများအကြောင်း မှတ်တမ်းများ
ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ — နေရာအားလုံးအတွက် မြေပုံများနှင့် လင့်ခ်များပါဝင်သော အပြည့်အစုံစာရင်း
whc.unesco.org — ဂူဂယ်ကမ္ဘာမြေ ရှိ တရားဝင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း
whc.kmz Archived 22 January 2020 at the Wayback Machine. — ဂူဂယ်ကမ္ဘာမြေ ရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage at Law-Ref.org Archived7February 2006 at the Wayback Machine. — Fully indexed and crosslinked with other documents
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်မြို့များ အဖွဲ့အစည်း — မြို့နေရာများ အကြောင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ငံအလိုက်_ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ_ဇယား&oldid=718340" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။